प्रार्थना यसरी गर्नु पर्छ ! | Nepali Christians
प्रार्थना यसरी गर्नु पर्छ !
October 15, 2015 5:13 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
खासमा प्रार्थना यसरी नै गर्नु पर्छ भन्ने कुनै नियम हुँदैन । प्रभु येशूका महान चेला मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरु भन्दा पनि प्रभु येशूले यो संसारमा रहनु हुँदा गर्नु भएका आश्चर्य लाग्दा कार्यहरु, र परमेश्वर तथा उहाँको राज्यको बारेमा हामी मानिसलाई येशूले बताउनु भएका कुराहरुको लिखित रेकर्ड गर्नु भएको छ ।
मत्ती ६:९-१३ मा प्रभु येशूले दिनु भएको प्रार्थनाको नमुना यस्तो छ । “स्वर्गमा विराजमान पबित्र परमेश्वर तपाईंको नाम पबित्र होस् । तपाईंको राज्य आओस् | तपाईंको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ, त्यस्तै यो पृथ्वीमा पनि पुरा होस् । आजको हाम्रो भोजन हामीहरुलाई दिनुहोस् । जसरी हामीले हामीमाथि अधर्म गर्नेहरुलाई क्षमा गरेका छौं, त्यसरी नै हाम्रा अधर्महरु क्षमा गर्नुहोस् । हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् र दुष्टहरुबाट जोगाउनुहोस् । किन भने राज्य, पराक्रम र महिमा सदासर्बदा तपाईंकै हुन्, आमिन ।”
बाइबलका पुरानो तथा नयाँ नियम दुबैका पुस्तकहरुको ठाउँ-ठाउँमा परमेश्वरको बचनमा कुनै पनि थप-घट नगर्नु भनेर चेतावनी दिइएको छ ।
व्यवस्था ४:२ “मैले तिमीहरुलाई दिएका आज्ञाहरुमा केही पनि घटबढ नगर्नु, तर मैले तिमीहरुलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरका आज्ञाहरु पालन गर्नु !”
व्यवस्था १२:३२ “जे जति कुराको आज्ञा मैले तिमीहरुलाई दिएको छु, ती पालन गर, र तिनीहरुमा केही घटबढ नगर !”भजन संग्रह ११९:१६० “तपाईंका सम्पूर्ण बचनहरु सत्य छन्, र तपाईंका सबै धार्मिक नियमहरु अनन्तका छन् !”
हितोपदेश ३०:६ “उहाँका बचनहरुमा नथप्, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनुहुनेछ र झूटा प्रमाणित गर्नुहुने छ !”
प्रकाश २२:१८-१९ “यस पुस्तकको अगमबाणीका बचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु: यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका बिपत्तिहरु परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ । अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका बचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएको जीवनको वृक्ष र पबित्र शहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोस्नुहुनेछ ।”
त्यसैले परमेश्वरका बचनमा हामीले कुनै पनि कुरा थपघट गर्नु हुँदैन ।
तर प्रभु येशू यस संसारमा हुँदाको सामाजको ढांचा तथा आवश्यकतामा, र अहिलेको हाम्रो सामाजको ढाँचा तथा आवश्कतामा भने एकदम भिन्नता छ । युग अनुसार हाम्रा आबश्यकताहरु पनि थपिएकाले त्यस्ता थप कुराहरु पनि हामीले हाम्रो दैनिक प्रार्थनामार्फत परमेश्वरमा बिसाउन मिल्छ । तसर्थ परमेश्वरको आज्ञा अपरिबर्तित हुन्छ भने प्रार्थना समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्न मिल्छ ।
आफ्नो परिवार, नातेदार, मण्डली, मण्डली परिवार, संसारका चर्चहरु, परमेश्वरको राज्य बिस्तारको खातिर आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा पारेर हिड्ने प्रचारकजनहरुको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ । यहाँसम्म कि आफ्नो बोस, सहकर्मी, आफूले काम गर्ने ठाउँ, आफ्नो घरबेटीको लागि समेत प्रार्थना गर्नु पर्दछ । आफूलाई नै दुख दिने कोही छ भने पनि परमेश्वर उक्त व्यक्तिको हृदयमा बोल्नुहोस्, उसका नराम्रा कार्य र विचारलाई क्षमा दिनुहोस्, उसलाई सुधार्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्दछ | एकदम खराब मान्छे पनि परमेश्वरको बचनले एकदम असल बन्न सक्छ । परमेश्वरका महान सेवक पावलले पनि त आफू अविश्वासी हुँदा विश्वासीहरुलाई एकदमै बढी सताएका थिए नि !
खराब कार्यहरु पनि एक किसिमले पाप सरह नै हुन् । क्षमा नमागीकन कुनै पनि पाप क्षमा हुन सक्दैन । खराब र घमन्डी व्यक्तिले परमेश्वरसंग क्षमा नमाग्ने भएकोले प्रार्थना गर्दा त्यस्ता व्यक्तिको निम्ति समेत आफूले क्षमा माग्नु पर्दछ ।
ब्रमाण्डका सारा बस्तुहरुमध्ये प्रार्थनामात्र यस्तो बिषय हो जो कहिलै खेर जाँदैन । आफ्नो समयमा परमेश्वरले अबश्य उत्तर दिनुहुन्छ ।
हुन त बिषय अनुसार प्रार्थना फरक-फरक हुन्छ, तथापि हामीले दैनिक नियमित गर्ने प्रार्थनामा मोटामोटीरुपले निम्न ३ कुराहरु क्रमबद्ध तबरले सम्मिलित गर्ने बानी गर्नु पर्दछ ।
१) सर्बप्रथम परमेश्वर को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वीकार्नु पर्दछ ।
२) त्यसपछि शुद्ध र सारा हृदयले उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्नु पर्दछ ।
३) अनि मात्र आफ्ना कुराहरु विनम्र भावले उहाँमा जाहेर गर्नु पर्दछ ।
आफ्ना कुरा जाहेर गर्दा उहाँलाई नै आदेश दिएजस्तो गरी “यस्तो गर्नुहोस् र उस्तो गर्नुहोस्” मात्र भन्नु हुँदैन ।
माथिका ३ वटै कुराहरु समेट्दा मोटामोटीरुपमा प्रार्थना यस्तो हुन आउँछ ।
“सर्व शक्तिमान परमेश्वर, सारा संसार, आकास र स्वर्गको सृष्टिकर्ता अनि मालिक पिता पुत्र पवित्र-आत्मा परमेश्वर यस घडी म तपाईंको चरणमा पर्दछु । हालेलुया प्रभु तपाईं यहोवा इरे परमेश्वर, नासरतको येशू, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, इमानुअल प्रभु येशु, अब्बा पिता र मसैया हुनुहुन्छ । तपाईं अब्राहामको, मेरा पिता-पूर्खाको, मेरो, मेरा साखा-सन्तान र दर-सन्तानको परमेश्वर हुनुहुन्छ ।
तपाईंको पबित्र चरणमा आई म यो घडी मेरो सारा हृदय अन्तर-आत्माले तपाईंको स्तुती, प्रशंसा र जयजयकार गर्दछु । तपाईंको नामलाई धन्यको भन्दछु, पबित्र पार्दछु र माथि उठाउदछु । मैले र मेरा परिवारले जानीनजानी गरेका हरेक अधर्म र तपाईंको आज्ञा बिरोधी कार्यहरु तपाईंमा क्षमा माग्दछु । हामीमाथि बिभिन्न किसिमले परेका सबैखाले श्रापहरुलाई तपाईंको रगतको शक्तिमा अहिले नै तोडदछु।
मेरा (हाम्रा)सबै अधर्महरु क्षमा गर्नु भएको लागि, हामीलाई जीवन, ज्योति, मुक्ति, शान्ति र उद्दार दिनुभएको लागि म तपाईंलाई धन्यबाद दिन्छु । मसंग भएका हरेक असल कुराहरु तपाईंबाटका हुन् । हरेक कुराको लागि तपाईंलाई धन्यबाद र महिमा चढाउंछु ।
मेरो मण्डली र मण्डली परिवारमा तपाईं महान परमेश्वरको महान आशिष रहोस् । संसारका सबै मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस् । तपाईंको शुद्ध धार्मिक एकतामा एक बनाउनुहोस् । तपाईंको राज्य बिस्तारको सन्देश फैलाउन लागिपरेका सम्पूर्ण प्रचारकहरुलाई आशिष दिनुहोस् । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरु जुटाउनुहोस् । सतावटबाट जोगाउनुहोस् । तपाईंको राज्य संसारभरि प्रचारिओस्, फैलिओस् ।
(यहाँसम्मको प्रार्थना जसलाई पनि मिल्दछ । यसपछि भने आफ्नो पारिवारिक स्थिति, जागिर, ब्यबसाय,र परिस्थिति अनुसार थप्दै जानु पर्दछ ।)
छोराछोरी हुनेहरुले थप्ने सम्भावित कुराहरु:
प्रभु परमेश्वर (मेरो) मेरा ___ ___ ___ लाई तपाईंको चरणमा सुम्पन्छु । तपाईंको बचन सुन्ने, बुझ्ने, बुझाउन सक्ने र पालन गर्ने असल सन्तान बनाउनुहोस् । तपाईंको अनुग्रह र आशिषमा हुर्काउनुहोस् । तपाईंको सम्पूर्ण सुरक्षा सदा प्रदान गर्नुहोस् । (उसको) उनीहरुको जीवनमा आशिष दिनुहोस् । तपाईंको राज्य बिस्तारमा योगदान दिनसक्ने असल सन्तान बनाउनुहोस् ।
बृद्ध अवस्थाका बाबुआमा हुनेहरुले थप्ने सम्भावित कुराहरु: मेरा बृद्ध अवस्थाका आमाबाबुलाई रक्षा गर्नुहोस् । उनीहरुलाई चाहिने खर-खाँचोका बस्तुहरु जुटाउनुहोस् । उनीहरुको दुर्बलतामा शक्ति दिनुहोस् । रोग-ब्यादबाट चंगाई दिनुहोस् । सु-स्वास्थ्य र दीर्घजीवि बनाउनुहोस् । उनीहरुको असल किसिमले सेवा गर्न मलाई ज्ञान र मन दिनुहोस् ।
दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनेहरुले थप्ने सम्भावित कुराहरु: (मेरो) मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको परिवारमा आशिष दिनुहोस् । उनीहरुको खेतीपातीमा, व्यवसायमा, दैनिक क्रियाकलापमा आशिष दिनुहोस् | उनीहरुलाई तपाईंको पवित्र चरणमा झुक्ने माध्यम जुटाउनुहोस् र अवसर दिनुहोस् ।
भाडामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनेहरुले थप्ने सम्भावित कुराहरु: मेरो घरबेटी, छरछिमेकलाई आशिष दिनुहोस् ।तपाईंको सुसमाचारको सन्देश र तपाईंको ज्योति जताततै बलोस्, शान्ति जताततै फैलियोस् ।
जागिर गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनेहरुले थप्ने सम्भावित कुराहरु: मेरो कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने हरेकलाई आशिष दिनुहोस् । मैले टेक्ने हरेक ठाउँमा तपाईंको राज्य फैलियोस्, मसंग संगै काम गर्ने हरेकले तपाईंलाई चिन्ने अवसर पाउन् ।
आजको दिन र यो बेलासम्म शुरक्षित राख्नु भएको लागि धन्यबाद । यो प्रार्थना हजुरको नाममा चढाउंछु । ग्रहण गरिलिनुहोस् ।
यसपछिको समय तपाईंको हातमा राख्दछु । फेरि तपाईंको चरणमा नआउन्जेल तपाईंको शान्ति, सुरक्षा र संरक्षण म र मेरो परिवारमा रहोस् । आमेन ।
प्रार्थना यसरी गर्नु पर्छ ! Reviewed by Admin on Oct 15 . खासमा प्रार्थना यसरी नै गर्नु पर्छ भन्ने कुनै नियम हुँदैन । प्रभु येशूका महान चेला मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरु भन्दा पनि प्रभु येशूले यो संस खासमा प्रार्थना यसरी नै गर्नु पर्छ भन्ने कुनै नियम हुँदैन । प्रभु येशूका महान चेला मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरु भन्दा पनि प्रभु येशूले यो संस Rating: 0
“ख्रीष्टियन” नाम जोडिएक...प्राचीन बाइबलिय शहर जोगाउन क्रिश्चि...